Shirweyne Qaran oo la xiriira shaqada xeer ilaalinta ayaa laga furay Muqdisho – Radio Muqdisho
Shirweyne Qaran ee nidaamka Xeer ilaalinta dalka ayna ka qeybgaleen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda F. Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Shirkan oo socondoona muddo laba maalin ah ayaa looga doodi doona qodabo ay ka mid yahiin, helsita xeer iyo qoraallo khuseeya shaqada xeer ilaalinta, xeer ilaaliyaha hab dhaqanka xeer ilaaliyaasha, xeerka khuseeya cadaalada, asluubta iyo Booliska iyo madax banaanida xafiiska Xeer ilaalinta.
Dr. Axmed Cali Daahir Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka ayaa tilmaamay in shirkan uu muhiimad wayn u leeyahay bahida caddaalada oo dhan isagii intaa raaciyay in muddada labada maalin ah si wayn ay u falanqayn doonaan shaqada xeer ilaalinta iyo dhisidda dallad ay ku mideysanyihiin xeer ilaaliyaasha dalkeena.
Wasiirka Cadaalada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay bahda cadaalada in ay codkooda ku muujiyaan muhiimada ay cadaaladdu leedahay.
Guddoomiyaha Maxkaada Sare Dalka Abuukaate Ibraahiim Iiidle Suleymaan oo ka hadlay furitaanka shirkaasi ayaa tilmaamay in shaqada cadaaladdu ay tahay mid aad u culus islamarkaana u baahan in loo guto si hufan oo ay ku dheehantahay Alle ka cabsi iyo waddaniyad.
Dhageyso: Isbadal xooggan oo laga dareemayo Magaalada Dhuusamareeb
Maraykanka oo ku baaqay in la dajiyo xaaladda bariga dhexe iyo Midawga Yurub oo ka soo hor jeestay go'aanka Trump